Stavanger, toerana any Norvezy | Vaovao momba ny dia
Stavanger, toerana any Norvezy
Mariela Carril | | Toerana fitsangatsanganana, Norvezy
Iray amin'ireo tranonkala tranainy indrindra any Norvezy Stavanger. Izy io dia sady tanàna no misy tanàna nipoirany tamin'ny taonjato faha-XNUMX, fa velona tamin'ny taonjato faha-XNUMX noho ny indostrian'ny solika.
Androany, izy dia tanàna mavitrika, iray amin'ny faritra lehibe indrindra eto metropolitan Norvezy, ary toerana fizahan-tany.
2 Visavava Stavanger
Araka ny noteneninay, izy dia iray amin'ireo tanàna tranainy indrindra any Norvezy ary ny toerana misy azy dia zava-dehibe nandritra ny tantaran'ny firenena. Manana seranan-drano lalina voajanahary ary miorina amin'ny teboka stratejikan'ireo zotra fandefasana varotra any amin'ny morontsiraka andrefana.
Rehefa tonga ny Kristianisma dia natanjaka ny fifandraisana teo amin'i Stavanger sy Eropa, indrindra fa ny Great Britain, izay nanala ny fivavahan'ny Viki. Ny fanatrehan'ny kristiana dia nanomboka natanjaka tokoa, niara-nifandray taminy monasitera natokana ho an'ny fanabeazana, fifandraisana izay nitazona tamin'ny alalany Moaenazy na dia taorian'ny Reformasiona aza dia niova tanteraka ny toe-javatra mahasoa an'ireo tompon-tany ara-pinoana.
Nanafika ny tanàna ny Alemanina tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, toy ny firenena iray manontolo, ary taorian'ny ady, Tamin'ny faran'ny taona 60 dia nanomboka ny fiakaran'ny solika taorian'ny nahitana tahiry tao amin'ny Ranomasina Avaratra. Stavanger dia nanjary ivon'ny morontsirak'ilay indostria, nanampy koa ireo nosy akaiky.
Hatramin'ny tapaky ny volana Jolay dia nisokatra ho an'ny fizahan-tany ny tanàna avy amin'ny firenena eropeana sasany, ao anatin'ny tontolon'ny areti-mandringana hatrany. ny Tanàna taloha Stavanger Izy io dia eo amin'ny sehatry ny andrefana amin'ny seranana ary mampiavaka azy Trano hazo 173 naorina teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX ary ny fiandohan'ny taonjato manaraka. Na izany na tsy izany dia tsy voafetra ho an'ity sehatra ity ihany ny fanamboaran-kazo, satria raha atotaly dia tsy maintsy misy trano manodidina ny 8 amin'ny fomba samihafa eraky ny tanàna.
Ny daty rehetra dia talohan'ny Ady Lehibe Faharoa ary manana fomba mitovy amin'ny an'ny Functionalism, ny style Empire ary Art Nouveau. Saingy, ny fifantohana tsara indrindra amin'ireo trano hazo ireo dia eto, amin'ny tranga taloha. Raha ny marina dia mifantoka ny sehatra fanangonana trano hazo lehibe indrindra any Eropa ary noho io antony io dia nahazo loka maro izy. Na dia ankehitriny aza dia faritra onenana malaza be izy io ary misy ny atrikasa fanaovana asa tanana sy fivarotana ary koa tranombakoka.
Mirehareha amin'ny tranony sy ny zaridainany ny olona eto, tsara tarehy amin'ny lohataona sy fahavaratra. Tsy trano lehibe izy ireo ary azo disassembled ary afindra. Amin'ny fotoana hafa dia nandeha nitety trano ny olona, ​​angamba avy tany amin'ny nosy na avy tany Ryfylke nitady asa vanim-potoana, noho izany ireo trano kely, efa tafaorina amin'ny taniny ireo, dia afaka mivoaka isaky ny maniry. Trano fotsy avokoa izy ireoFa talohan'izy ireo mena na mavo, satria ny loko fotsy dia lafo be ho an'ny fianakaviana mpiasa miasa.
Ny zavatra tsy tokony halainao eto dia ny Katedraly Stavanger, ny Stavanger Maritime Museum ary ny Petrole Museum. Katedraly Stavanger dia ny katedraly tranainy indrindra any Norvezy ary eo afovoan-tanàna izy io. Natomboka tamin'ny taona 1100 ny fanamboarana ary vita tamin'ny 1150. Natokana ho an'i Saint Swithun, Evekan'i Winchester voalohany io. Nirehitra tamin'ny 1272 ary namboarina tamin'ny fomba Romanesque aloha ary nitombo tamin'ny fomba Gothic taty aoriana.
Nandritra ny taonjato faha-XNUMX dia nisy fanovana hafa ihany koa ary eny, mendrika ny fitsidihana ny ao anatiny. Breidablikk dia tranon'ny fianakaviana taloha izay voatahiry tsara tamin'ny fomban'ny taonjato faha-50. Izy io dia manana fanaka Victoriana tany am-boalohany, lamba, latabatra, sary hosodoko, tranombokim-boky tamin'ny taona XNUMX tamin'ny taonjato faha-XNUMX, toeram-pialofana amin'ny baomba, efitrano fanasan-damba, efitranon'ny mpanompo, fitaovam-pambolena, kalesy ary zaridaina mahafinaritra. Varavarankely iray tamin'ny lasa.
Tranonkala hafa mitovy amin'izany ny Trano Ledaal, namboarina toy ny maro loko trano fonenana fahavaratra an'ny fianakavian'i Kielland tamin'ny 1799. tranon'ny mpanankarena izy ankehitriny ary miasa toy ny Fonenan'ny mpanjaka ary tranombakoka iray fananan'ny fanjakana. Ny zaridainany dia manan-tantara ary misy làlana tsara handalovana amin'izy ireo.
Ny Museum Stavanger dia tantara ara-kolotsaina sy voajanahary ary nisokatra tamin'ny 1877 tany amin'ny toerana hafa izy io, mba hifindra manodidina ny taonjato faha-XNUMX ka hatramin'ny toerana misy azy ankehitriny. Manana departemanta maromaro, sary hosodoko, haibolojika, ankizy, sns. Ary farany, ny Nisokatra tamin'ny taona 1999 ny Museum momba ny solika ary raha mahita azy avy any an-dranomasina ianao dia toa rig menaka eny amoron-dranomasina io. Noho izany dia zava-dehibe tokoa izany eo amin'ny sehatry ny morontsirak'i Stavanger.
Vato, beton ary vera no fanamboarana azy ary lehibe dia lehibe. Ny fanangonana azy dia mifantoka amin'ny asan'ny solika ao amin'ny Ranomasina Avaratra ary misy kely ny zava-drehetra fa raha te hahalala ny fomba fiasan'ity indostria ity ianao dia toerana tsara. Fanorenana mahaliana iray hafa koa ny Valbergtarnet, iray amin'ireo tranainy indrindra, hita avaratry ny Kianja Market, amin'ny saikinosy Holmen, ny faritra tranainy indrindra amin'ny tanàna.
Valbergtarnet Izy io dia tilikambo fanaraha-maso namboarina tamin'ny 1853 eo amin'ny toerana avo indrindra ao an-tanàna. Nisy mpiambina nalefa foana mba hahalalana ny mety ho hain'afo ary androany, tsy misy mpiambina, natolony fahitana lehibe momba ny tanàna, ankoatry ny fananana tranombakoka amin'ny rihana voalohany.
Fa ahoana ny any ivelan'ny tanàna fetra? Eny, faritra tsara tarehy izay misongadina ny zava-mahatalanjona voajanahary toy ny malaza Preikestolen, ny polipitra. Ity vato goavambe ity dia 604 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina ary be mpitsidika indrindra any amin'ny faritany misy an'i Stavanger, Rogaland. Zava-misy: tamin'ny 2017 dia olona 300 XNUMX no nitsidika azy, ary midika izany hoe adiny efatra amin'ny fitsangantsanganana hanao valo kilometatra.
Tsy dia mora loatra ny dia an-tongotra ka nanoro hevitra izy ireo ny hanana traikefa an-tongotra an-tongotra. Ny zavatra tsara dia azo tsidihina mandritra ny taona mandavantaona ny Pulpit, na dia tsara tarehy kokoa aza ny fahavaratra (manomboka amin'ny aprily ka hatramin'ny oktobra, novambra). Tsy maintsy mandeha amina kitapo ianao, manisa fa 30 litatra dia tonga lafatra, miaraka amin'ny finday, sarintany, jiro ary kitapo fanampiana voalohany. Ny làlana mihitsy dia manomboka amin'ny Preikestolen fjellstue, trano bongo iray tonga amin'ny fiara na sambo, na amin'ny bus avy any Stavanger.
Misy làlana voatanisa ary raha tsy manana traikefa ianao dia io no safidy tsara indrindra. Toy izany koa ny Faritra Ryfylke miaraka amin'ny fjords sy ny tendrombohitra misy azy. Atsinanan'i Stavanger, rehefa avy nanao dia an-tsambo kely mahafinaritra ianao dia tonga Lysefjord, fjord 37 kilometatra ny halavany ary efa ho roa metatra ny sakany. Maitso dia maitso ny ranony ary raha jerena ny fomba tsara indrindra dia misy vato iray metatra arivo metatra ny haavony. Fijery tsara tarehy.
Nilaza izahay tamin'ny voalohany fa i Stavanger dia tanàna amorontsiraka manan-danja ary manitatra izany ihany koa nosy sasany. Ireo nosy dia eo avaratra, eo anelanelan'ny nosy sy ny nosy, ary ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny kely Klosteroy, mifandray amin'ny nosy lehibe kokoa, Monteroy, amin'ny tetezana iray. Ilay nosy kely dia malaza amin'ny azy Abbey Augustin tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo. Sambo no tratra azy ary mendrika izany.
Hatreto dia famintinana ny tsy maintsy jerena ao Stavanger. Raha sambany ianao dia tsara ny mijanona eo afovoan-tanàna satria misy toerana manintona maro azo aleha an-tongotra. Ny tanàna tsara indrindra dia ny tanàna taloha, Gamle Stavanger, Vagen, eo amin'ny bay, misy bar, club ary trano fisakafoanana, ary Bekkefaret, eny an-tsisintany ary akaikin'ny tahiry voajanahary. .
Ahoana no ahatongavanao any Stavanger? Amin'ny fiaramanidina, ny seranam-piaramanidina dia 20 minitra fotsiny avy eo afovoany, lamasinina avy any Oslo na Kristiansand na amin'ny bus avy any amin'ireo tanàna ireo na Bergen.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Stavanger, toerana any Norvezy
Inona no ho hita any Gengenbach, Alemana